Ọnụ ahịa anyị nwere ike ịgbanwe dabere na ọkọnọ na ihe ndị ọzọ ahịa. Anyị ga-ezitere gị ndepụta ọnụahịa emelitere mgbe ụlọ ọrụ gị kpọtụrụ anyị maka ozi ndị ọzọ.
Ee, anyị chọrọ iwu mba ụwa niile ka ha nwee ọnụ ọgụgụ kacha nta na-aga n'ihu. Ọ bụrụ na ị na-achọ ire ere mana na ọnụ ọgụgụ dị nta karị, anyị na-akwado ka ị lelee weebụsaịtị anyị
Ee, anyị nwere ike ịnye ọtụtụ akwụkwọ gụnyere Asambodo Analysis / Conformance; mkpuchi; Mmalite, na akwụkwọ mbupu ndị ọzọ ebe achọrọ ya.
Maka ihe nlele, oge ụzọ bụ ihe dịka ụbọchị 7. Maka mmepụta oke, oge ụzọ bụ 20-30 ụbọchị mgbe ị nwetasịrị nkwụnye ego nkwụnye ego. Oge ụzọ na-adị irè mgbe (1) anyị natara nkwụnye ego gị, yana (2) anyị nwere nkwenye ikpeazụ gị maka ngwaahịa gị. Ọ bụrụ na oge ndu anyị anaghị arụ ọrụ na njedebe gị, biko jiri ire gị gafee ihe ịchọrọ. N'ọnọdụ niile, anyị ga-agbalị ịnabata mkpa gị. Ọtụtụ mgbe, anyị na-enwe ike ime otú ahụ.
Anyị na-akwado ihe anyị na ọrụ anyị. Nkwenye anyị bụ ka afọ ju gị na ngwaahịa anyị. N'akwụkwọ ikike ma ọ bụ na ọ bụghị, ọ bụ omenala ụlọ ọrụ anyị iji dozie ma dozie nsogbu ndị ahịa niile ka afọ ojuju onye ọ bụla.
Ee, anyị na-eji nkwakọ ngwaahịa mbupụ dị elu mgbe niile. Anyị na-ejikwa nkwakọ ihe egwu pụrụ iche maka ngwa ahịa dị ize ndụ yana ndị na-ebufe ebe nchekwa oyi kwadoro maka ihe ndị nwere mmetụta okpomọkụ. Ọkachamara nkwakọ ngwaahịa na ihe ndị na-abụghị ọkọlọtọ nwere ike ibute ụgwọ ọzọ.
Ọnụ ego mbupu na-adabere n'ụzọ ị na-ahọrọ iji nweta ngwongwo. Express na-abụkarị ụzọ kachasị ọsọ mana ọ dịkwa oke ọnụ. Site na ụgbọ mmiri bụ ihe ngwọta kachasị mma maka nnukwu ego. Kpọmkwem ọnụego ibu anyị nwere ike inye gị naanị ma ọ bụrụ na anyị maara nkọwa nke ego, ibu na ụzọ. Biko kpọtụrụ anyị maka ozi ndị ọzọ.
Tungsten Carbide Vs Carbide, Carbide Punch ma nwụọ, Dureza Del Titanio, Nkọwapụta Cnc Machining China, Akụkụ omenala & eyi, Akụkụ Carbide Yiri,